Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihi Jaaliyada Switzerland ee sanadlaha oo guulo kasoobaxeen
Shirweynihi Jaaliyada Switzerland ee sanadlaha oo guulo kasoobaxeen
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka Switzerland ayaa isugu yimid shirweynahoodi sanadlaha ahaa taariikhdu markay ahayd 28/09/2013.
Shirweynahan oo ahaa shirsanad walba ay jaaliyadu qabato waxaa lagu casuuma shacabweynaha somaliyeed ee ku nool wadanka switzerland iyo saxiibada halganka. Jaaliyadu waxaa kale oo ay ku casuuntaa shirweynahan kaadiriinta firfircoon ee jaaliyadaha Ogadeniya iyo masuuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya. Iyo fanaaniinta loogu jecelyahay kuwaas oo soo bandhiga hiddaha iyo dhaqanka Ogadeniya gaar ahaan astaamaha suugaaneed ee halganka Ogadeniya lagu garto.
Shirkan waxaa sanadkan ka qeyb galay xubno kamid ah masuuliyiin iyo kaadirka Jaaliyadaha Ogadeniya ee Europe iyo fanan Maxamuud Cumar Jaango. Masuuliyiinta ka qeyb gashay shirkan waxaa kamid aha Gudomiyaha Jaaliyada Finland Xassan Kamaal, Gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee Norwey Cabdullaahi Caa iyo Halgame Maxamed Dheeg Arrimaha Siyaasada ee HAD, oo kasocday Jaaliyada Norwey, iyo Halgame Cabdifataax Xirsi, Aggaasimaha Hoggaanka Ururka oo kamida Jaaliyada Ogadeniya ee UK,.
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka Switzerlan oo halbowle u ah halganka Ogadeniya ee kasocda dibadaha ayaa shirkan uga faa ideysata sidii ay usoo bandhigi lahaayeen waxqabadka jaaliyada iyaga oo islamarkaasna xog waran buuxa kasiiya shacabweynaha halganka.
Jaaliyada Switzerland waxay caan ku tahay qabanqaabinta Banaanbaxyada ka dhaca xarunta Qaramada midowbay ee Geneva, iyo Guriga Baarlamaank EU ee Brussel. Jaaliyadu waxay sanad kasta ka qeybgashaa iyaga oo matalaya Qadiyada Ogadeniya kulamo aad u heersareeya oo lagu qabto Xarunta Qaramada midowbay kuwaas oo u badan qiimeynta arrimaha xuquuql insaanka Ethiopia. Jaaliyadu waxay guulo badan kasoo hoysay sidii cadaadis adag Haayadaha UN-tu ay u saari lahaayeen gumeysiga Ethiopia loogagana doodi lahaa lacagaha deeqaha ah ee lasiiyo Ethiopia iyo xadgudubyada ay taliska woyanuhu u geystaan shacabka Ogadeniya.
Shirweynahan ayaa lagu soo bandhigay filimaan iyo qudbado aad u qiimi badnaa oo lagaga hadlayay marxalada halganka Ogadeniya iyo heerka uu gaadhsiisanyahay maanta.
Shirkan ayaa amaan iyo boggaadin loogu soo jeediyay Ciidanka JWXO ee jiida hore ee daggaalka ku jira si ay u badbaadiyaan sharafta dhulkooda iyo dadkooda.
Shirkan ayaa sidoo kale lagu qancay oo lagu diirsaday guulaha ay Ciidamada JWXO soo hooyeen. Waxaa kale oo hoosta laga xariiqay in lasii xoojiyo kaalinta ay jaaliyadaha ogadniya ka qaadanayaan halganka, Waxayna jaaliyada Switzerland oo dadaal uba yareyn markii hore shirkan ku go’aamiyeen in shaqada ay wadaan sii saddex jibaaraan kuna soo kordhiyaan dadaalo kale oo howlihi ay wadeen kamid ah.
Shirkan ayaa si buuxda loogu taageray halganka waxayna jaaliyadu wacad ku martay inay kaalmo dhankasta ah kageysan doonaan halganka loogujiro aayoka tashiga shacbiga somalida Ogadeniya ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya.
Gudomiyaha Jaaliyada Switzerland Mudane Cabdullaahi ayaa ONA u sheegay in kulankan sidii loogu talogalay uu u dhacay kuna faraxsanyihiin qodobada kasoo baxay ee lagu xoojinayo halganka Ogadeniya.